Onye na-achọ ihe niile (129453-61-8) HPLC≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / Na-akwụ ụgwọ (129453-61-8)
Rating: SKU: 129453-61-8. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Fulvestrant (CAS 129453-61-8), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Fulvestrant ntụ ntụ bụ onye antagonist na-anabata ihe nke estrogen synthetic. N'adịghị ka mgbu (nke nwere mmetụta nke agonist) na ndị na-emepụta aromatase (nke na-ebelata estrogen dị na mkpụrụ ndụ ụfụ), onye na-ekpo ọkụ na-ejikọta ndị na-anabata estrogens na mkpụrụ ndụ cancer nke ara, na-akpata nrụrụ estrogen na abawanye etiti estrogen.
Video nke zuru ezu
Uwe isi ihe omuma
Usoro Molecular: C10H14N6O5
Molekụla arọ: 298.25536
Ochichi zuru ezu (129453-61-8) iji mee ihe na steroid
Fulvestrant (CAS 129453-61-8), aha aha bụ Faslodex.
Ojiji zuru ezu
Ojuju na-abịa dịka ihe ngwọta (mmiri mmiri) ka a gbanye ya ngwa ngwa na 1 gaa na 2 nkeji n'ime akwara. Ọ bụ dọkịta ma ọ bụ nọọsụ nọ n'ụlọ ọrụ amedic na-arụ ọrụ (129453-61-8). A na-enyekarị ya kwa izu 2 maka usoro 3 mbụ (ụbọchị 1, 15, na 29) ma otu ugboro n'ọnwa ọzọ. Ị ga-enweta ọgwụ ịṅụ ọgwụ dịka nkedo abụọ dị iche iche (otu n'ime bọtịnụ ọ bụla).
Ịdọ aka ná ntị na Fulvestrant
A na-atụle mmeghachi omume ndị na-esonụ dị iche iche n'isiokwu ndị ọzọ nke labeling: Risk of Bleeding, Extension Exposure in Patients with Hepatic Impairment, Ngwọta Na-ahụ Maka Ọgwụ, Embryo-Fetal Toxicity.
Hormones bụ ọgwụ ndị na-emepụta site na glands na ahụ, na-ahụ ọbara ma na-akpata mmetụta na anụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, hormone testosterone mere na testicles na ọ bụ ọrụ maka àgwà nwoke dịka olu dịkwuo na ntutu isi. N'iji ọgwụgwọ hormone agwọ ọrịa kansa dabeere na nchọpụta na ndị nabatara maka homonụ a kapịrị ọnụ bụ ndị dị mkpa maka uto mkpụrụ ndụ dị n'elu ụfọdụ mkpụrụ ndụ tumo. Usoro ọgwụgwọ na-arụ ọrụ site na ịkwụsị mmepụta nke hormone, igbochi ndị na-anabata hormone, ma ọ bụ na-etinye ọgwụ ndị yiri nke ahụ maka hormone na-arụsi ọrụ ike, nke na-enweghị ike iji ya na cell tumor. A na-ahazi usoro ọgwụgwọ dị iche iche site na ọrụ ha na / ma ọ bụ ụdị hormone nke emetụta.
Ọtụtụ ọrịa cancer ara nwere ndị na-anabata estrogen, na uto nke etuto ndị ahụ bụ estrogen. Ọkachamara (129453-61-8) bụ estrogen receptor downregulator, nke a pụtara na ọ na ejikọta na saịtị estrogen na mpi na estrogen n'ime ahụ. Ozugbo ọ na-ejikọta na saịtị ahụ, ọ na-eme ka ndị nkwụnye ahụ kwatuo, si otú a gbochie mmeghachi omume cellular dị ka estrogen.
Otu esi azụta Fulvestrant si AASraw